Gothic gutter-ka ku xiran aqalka dhirta lagu koriyo ee isku dhafan ayaa ka kooban bir kulul oo kulul oo leh waxqabadka wanaagsan ee xoogga sare ee codsiyada culeyska barafka sare iyadoo la ilaalinayo qiimaha si fiican ugu dhex jira maqnaanshaha’s miisaaniyadda, iyo sidoo kale waxay leedahay faa'iidooyin wanaagsan oo ka hortagga daxalka.
iska caabin xoog leh oo dabaysha iyo barafka iyo ka hortagga daxalka wanaagsan. Macno malahan dhanka ay tahay, beeraleydu maheli doonaan hawo koriin isku xiran oo dhaqaale iyo hufan.
Xulashada kuleylka kuleylka sare iyo filimka iftiinka sare ee PO oo ah maaddada ugu sareysa ee lagu beddelayo muraayada ayaa si weyn u yareynaysa maalgashiga maalgashadayaasha, iyadoo la ilaalinayo bilicsanaanta iyo adkeysiga aqalka dhirta lagu koriyo. Oo waxaa kaliya loo baahan yahay in si joogto ah loo nadiifiyo filimka ugu sarreeya. Yaraynta dayactirka marxaladda dambe, dhanka kale, sidoo kale waxay yareysaa kharashyada qaarkood.
Gurigaan noocan ah ee lagu koriyo ayaa ka duwan midka keliya ee lagu koriyo, tunka kaliya ma ahan, wuxuu leeyahay in ka badan labo taako, marka aqalka cagaaran ee loo yaqaan 'greenhouse' wuxuu u yaqaanaa aqalka dhirta lagu koriyo oo badan.
Ballaca taako wuxuu noqon karaa 6m ilaa 10m caadi ahaan, balaca ugu yar waa 6m, balaca balaaran ee balaaran waxaan 16m ku sameyn karnaa aqalka dhirta lagu koriyo ee balaastigga ah ee balaastiga balaaran leh .Dhererka waxaa loo habeeyay teknoolojiyadeena aqalka dhirta lagu koriyo waa mid horumarsan, howsha oo dhan waxay waqtiga ilaalin kartaa Greenhouse waxay ilaalin kartaa dhirteenna si looga fogaado saameynta cimilada daran
Aqalka dhirta lagu koriyo ee lagu arko-ilkaha wuxuu leeyahay laba nooc: Sawir-weyn oo ilkaha lagu arko iyo mid yar oo miinshaar ah. Laakiin guud ahaan waxaan isticmaalnaa inbadan waa koriyo yaryar oo lagu arko-ilkaha. Aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'ilko-koriinka' ayaa aad loogu jecel yahay gobolka lamadegaanka iyo cimilada kulaylaha.
Aqalka dhirta lagu koriyo ee lagu arko-ilkaha badanaa wuxuu qaataa hawo dabiici ah dhinacyada iyo dusha sare, hawo kulul oo hawo ah oo hawo ah oo hawo ah ayaa si dhakhso leh ugu daallan banaanka, taasoo yareyneysa heerkulka gudaha iyo qoyaanka. Saamaynta ay ku yeelatay hawo-qaadashada dabiiciga ahi, aad ayey ugafiican tahay aqalka dhirta lagu koriyo ee qalooca badan. Markaa heerkulka bannaanka ee sannadlaha ahi waa aagag aad u sarreeya, gaar ahaan naqshadaynta aqalka dhirta lagu koriyo oo aan lagu taageerin habka hawo farsamaynta qasabka ah, aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'green-ilig greenhouse' ayaa ah qaabka ugu habboon ee lagu koriyo.
Aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'Gothic type greenhouse' waa mid la mid ah midka loo yaqaan 'Dome one', laakiin laba kala duwanaansho midkood waa qaabka, kan kalena waa kan lagu koriyo Gothic wuxuu kordhin doonaa isku xiraha maaddada, guriga dhirta lagu koriyo ee nooca Gothic ahna waa mid ku habboon meesha ay dabayshu culus ka jirto iyo baraf, maxaa yeelay ma sahlana in la istaago biyaha iyo barafka, way siman yihiin.
Madadaalo / Dayac-tirnaan Greenhouse - Noocyo badan oo kala duwan oo loo yaqaan 'Venlo Version'
Qaab dhismeedyo fara badan oo kala duwan Cannabis Greenhouse oo ay weheliso daboolka xaashida polycarbonate Waxay ku habboon tahay qorshaynta dhir ballaaran, maareyn mideysan maamulka kooxda Greenhouse, oo si weyn u horumarinaysa wax soo saarka iyo tayada
1. Degaan xakamaynta ka wanaagsan
2. Qiimaha kontoroolka deegaanka oo hooseeya
3. Kicinta dhulka oo sareysa
4. Si fudud loo fidiyo, adeegsi ku filan oo gudaha ah
5. aqalka dhirta lagu koriyo oo caqli badan, kaydinta kharashka shaqaalaha
Nooca Venlo ee lagu koriyo muraayadaha multi-taako waa nooc koriyo horumarsan oo laga keenay Nederland. Waxay leedahay muuqaal casri ah, qaab dhismeed deggan, wax qabadka kuleylka oo aad u fiican, jihooyin badan oo roob ah, taako ballaaran, qaab dhismeedka shabaq, dheecaanno waaweyn, iska caabin dabaysha oo xoog leh, waxayna ku habboon tahay meelaha leh dabeyl iyo roob badan. Sababtoo ah gudbinta iftiinka sare iyo waxqabadka kuleylka kuleylka sare, waxay si gaar ah ugu habboon tahay alaabada qaar ee u baahan kuleylka kuleylka oo leh qiime sare.